नेकपा (दाहाल-नेपाल) समूहले गरेको बन्दले देशभर कहाँ के भयाे?
On: २०७७ माघ २२ गते, बिहीबार, ०६:०४ बजे प्रकाशित
काठमाडाैं। नेकपा (दाहाल-नेपाल) समूहले गरेको बन्दले देशैभरकाे जनजीवन प्रभावित हुन पुग्याे। कतै झडप भए भने कतै सयौँ नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परे।
काठमाडाैंमा कहाँ के भयाे?
कलंकीबाट स्थायी कमिटी सदस्य तथा वाग्मती प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय संघर्ष समितिका सचिव डा. विजय पौडेल, केन्द्रीय कमिटी सदस्य हितमान शाक्य, केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष अमृता थापालगायतका नेता कार्यकर्ताहरुलाई बिहानै गिरफ्तार गरिएको छ।
चाबहिलबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य कृष्ण केसी सहितका नेताहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ भने बागबजारबाट युवा नेता रमेश मल्लसहित विद्यार्थीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ। ​काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट गिरफ्तार गरिएका ७२ जना नेता कार्यकर्तालाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा राखेको छ।
यसैबीच आज बिहानै गोंगबुमा टयाक्सीमा आगजनी भएकाे थियाे। प्रचण्ड-माधव पक्षले बिहीबार आयोजित आमहड्तालका क्रममा ट्याक्सीमा आफूहरूले आगजनी नगरेकाे दावी गरेको छन्।
सो समूहका राष्ट्रिय युवा संघका संयोजक राम प्रसाद सापकोटा दीपशिखाले गोङ्गबुमा भएको ट्याक्सीमा आन्दोलनकारीको संलग्नता नरहेको दावी गरेका छन्।
तनहुँ र कास्कीमा गरि १७ नेता–कार्यकर्ता गिरफ्तार
तनहुँमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य प्रतापलाल श्रेष्ठका साथै अतिन्द्रकेशरी न्यौपाने, ओमराज आले, विष्णुभक्त सिग्देल, श्रीराम कार्कीसहित १६ जना नेता-कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरिएको छ। त्यसैगरि उता कास्कीमा विनायक तिमिल्सेनालाई गिरफ्तार गरिएको छ।
प्रदेश २ मा कहाँ के भयाे?
वीरगञ्जमा रामबाबु बैठा, रहबर अन्सारी, मनोज चौधरी, प्रभाकर गुप्तालगायतका ३५ जना नेता-कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरिएको छ। ​सिराहामा विवेक परियार, विराट मण्डल लगायतका नेता-कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरिएको छ। ​बाराबाट मुकेश साह, जवाहिर अन्सारी, हरिओम साह, राजेश पटेलसहित ६ जना नेताहरुलाई गिरफ्तार गरिएको छ।
जनकपुरको शिवचोकमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप
धनुषामा नेकपा दाहाल नेपाल समूहले आह्वान गरेको बन्दका क्रममा जनकपुरको शिवचोकमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भयाे। झडपमा प्रहरीले गोली समेत चलाएको छ।
शिवचोकमा बन्दकर्ताले गाडी चल्न नदिएपछि प्रहरीले खुलाउने क्रममा झडप हुँदा प्रहरीले हवाइ फायर गरेकाे हाे। बन्दकर्ताले प्रहरीकै गाडीमा समेत तोडफोड गरेपछि हवाइ फायर गरिएको प्रहरीले बताएकाे छ।
लाठीचार्जका क्रममा नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहका नेता रामचन्द्र झासहित ११ जना र केही प्रहरी समेत घाइते भए।
कपिलवस्तुमा दाहाल–नेपाल समूहका २ जना कार्यकर्ता समातिए
कपिलवस्तुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दाहाल–नेपाल समूहको हड्तालको आह्वान गर्दै हिँडेका दाहाल–नेपाल समूहका २ जना कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रण लिएको छ।
सदरमुकाम तौलिहवाबाट नेकपाका जिल्ला सदस्य दीपक पाण्डे र अनेरास्ववियु नेता हरिशचन्द्र खनाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मराज भण्डारीले जनाए। नियन्त्रणमा लिएका पाण्डे र खनाललाई प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तौलिहवामा राखेको छ।
जिल्ला सदरमुकाम तौलिहवामा हड्तालको आंशिक प्रभाव पर्यो भने चार नम्बर जितपुर, बनगाई, गोरुसिंगे, चन्द्रौटा, कृष्णनगर लगायत क्षेत्रमा पूर्णरूपमा प्रभाव पर्याे। एम्बुलेन्स, खानेपानी, दमकल, जस्ता अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा बिहानदेखि अन्य सवारी चलेनन्।
प्रदेश १ का चार जिल्लामा ८ वटा सवारीसाधन तोडफोड
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले बिहीबार आयोजना गरेको आमहड्तालका क्रममा प्रदेश १ का चार जिल्लामा ८ वटा सवारीसाधन तोडफोड भएको छ। नौ जना आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको छ।
१ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले दिएको जानकारी अनुसार मोरङमा ३, सुनसरीमा ३, झापा र इलाममा १/१ गरी ८ वटा सवारीसाधन तोडफोड भएको छ। त्यस्तै, मोरङमा ६ र सुनसरीमा तीन जना आन्दोलनकारी पक्राउ परेका हुन्। बन्दकर्ताहरूले प्रदेश-१ को राजधानी विराटनगरमामात्र तीन वटा सवारी साधन तोडफोड गरेका छन्।
विराटनगरको रोडशेष चौकमा बिहान भारतीय नम्बर प्लेटको सवारीसाधन तोडफोड गरेका हुन्। रानीविराटनगरसडकखण्ड अन्तर्गत दक्षिणदेखि विराटनगरतर्फ आउँदै गरेको १० सिजेएच ४४४ नम्बरको स्कारपियो गाडी तोडफोड गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
बन्दकर्ताले तोडफोड गरेको उक्त गाडी आइसीपी निर्माण कम्पनीको हो।
यस्तै, विराटनगर २ तीनपैनीस्थित बा १ झ ९११८ नम्बरको सरकारी गाडी तोडफोड भयो। तीनपैनी चौक अगाडि सरकारी गाडी तोडफोड भएपछि मोरङ प्रहरीले नेकपा मोरङको पार्टी कार्यालय अगाडिदेखि मोरङ जिल्ला संघर्ष समितिका सह-संयोजक पारुल क्षेत्रीसहित ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
डडेल्धुरामा प्रहरीमाथि आक्रमण
डडेल्धुरामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको छ। बजार बन्द गराउँदै हिँडेका कार्यकर्ताले प्रहरीमाथि जिल्लाको भात्काँडा बजारमा आक्रमण गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्र नेपालले बताए।
उनीहरूको ढुंगा प्रहारबाट भात्काँडा प्रहरी इन्चार्ज अम्मरबहादुर खडायत घाइते भएको उनले जानकारी दिए।
ढुंगा प्रहारबाट खडायतको खुट्टामा चोट लागेको छ। आक्रमण गर्नेहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उता प्रचण्ड–नेपाल समूह निकट अनेरास्ववियू डडेल्धुराका संयोजक सन्तोष भाटले बजार बन्द गराउँदै गरेका कार्यकर्तालाई अवरोध गरेपछि हातपात गरिएको बताए।
सिन्धुलीमा पनि झडप
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-नेपाल समूह र ओली समूहबीच सिन्धुलीमा झडप भएको छ। प्रचण्ड नेपला समूहले बिहीबार आह्वान गरेको बन्दको प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य शान्तिमान कार्कीलगायतले उल्लंघन गरेको भन्दै सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका ६ स्थित शान्तिनगरचोकमा दुई समूहबीच झडप भएको हो ।
ओली समूहका नेता कार्यकर्ता मोटरसाइकलमा कमलामाई नगरपालिका ६, २ नम्बर बजारदेखि ढुङ्गेबास जाँदै गर्दा प्रचण्ड नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सह–इन्चार्ज कमलजंग राईलगायतका नेता कार्यकर्ताबीच शान्निगरमा झडप भएको हो। तर, नेकपा प्रचण्ड नेपाल समुहका अध्यक्ष राजन दाहालले झडप नभएको बरु बन्दको अवज्ञा गर्नेहरुलाई संझाई बुझाई गरिएको बताए।
उता झडपमा संलग्न नेता कार्यकर्तालाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न ओली समूहले माग गरेको छ।
२०७७ माघ २२ गते, बिहीबार, ०६:०४ बजे प्रकाशित